မြန်မာ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ ရုရှားမှာတွေ့ဆုံ…………. | YTV
မြန်မာ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ ရုရှားမှာတွေ့ဆုံ………….
မြန်မာ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာ အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ ရုရှားမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ Victory Day of Great Patriotic War(၇၅)နှစ်ပြည့် စစ်ရေးပြအခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့စဉ်က တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်…....
အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်ကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့ ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေ၊ နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ နယ်စပ်ဒေသစီမံခန့်ခွဲမှုမှန်ကန်ကောင်းမွန်စေဖို့ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာတွေနဲ့ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာ အကြမ်းဖက်သမားအခြေချနေထိုင်မှုမရှိစေရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်…......
ဒါ့အပြင် ကုလားတန်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုနဲ့ စီမံကိန်းအောင်မြင်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့် အခြေအနေတွေ၊ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာတွေမှာ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေတွေအပြင် လတ်တလောမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ သင်တန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ့် အခြေအနေတွေကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်…........
Davis Cup နဲ့ Fed Cup တင်းနစ် ပြိုင်ပွဲတွေ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အထိ ရွှေ့ဆိုင်း………. ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များအား ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်အထိ ထပ်တိုး……….